Hel caawin :: St. Stephen’s Human Services
Waxa jira saddex waxyaalood oo muhiim ah oo lagu ogaado awoodda St. Stephen si ay usiiso caawin.
Boggani wuxuu diiradda saarayaa ilaha laga heli karo Gobalka Hennepin sababtoo ah St. Stephen wuxuu u adeegaa deganayaasha Gobalka Hennepin. Haddii aad ka raadinayso kaalmo gobal kale, 211 (800-543-7709) ama Khadka Taleefanka Meelaha Shacabka (1-888-234-1329) waxay noqon kartaa meel waxtar leh oo laga bilaabo.
Barnamijyada hoyga iyo guryeynta ee St..Stephen kaliya waxa heli karaa dadka ay soo gudbiyeen dagmada Hennepin iyada oo loo marayo nidaamka isku xirnaanta galitaanka.Nidaamka Isku-xirnaanta waa habka gobolka ee abaabulida iyo siinta adeegyo guriyo oo loogu talagalay dadka heysata hoy la'aan gudaha gobalka Hennepin. Sababtoo ah khayraadka guryuhu way koobanyihiin,habkani waxa loogutalagalay si loo xaqiijiyo in shakhsiyaadka iyo qoysaska leh nuglaanta ugu sareysa, baahida adeeggyada, iyo dhererka guri la'aanta ay helaan mudnaanta koowaad ee meelaynta guryaha.
St. Stephen waxay la shaqeeyaan laba kooxood oo kala ah: dadka qaangaarka ah oo aan lahayn carruur, iyo qoysaska leh caruur da'doodu ka yar tahay 18 sano. Haddii aad u dhexeyso da'da 16 iyo 24, Shabakadda Adeegyada Dhalinyarada waxay noqon kartaa meel fiican oo aad u raadsato caawimo.
Waxa ubahanahay hoy
dhalasho ama aqoonsi
cunto ama qabays
caawimo oo waxkale ah
Banaanka ayan jiifaa
waxan ubahanahay hoy…
Logu talagalay dadka waweyn:
Waxaa jira hal meel oo la aado si aad uhesho lixda hoy ee dadka waweyn ee kuyaala Minneapolis: Isku xirka hoyga dadka waweyn. Waxay ku taallaa qaybta hoose ee kaniisada Olaf ee 215 S 8da St, Minneapolis, MN. Hoyga isku xirka Dadka Waaweyn wuxuu furan yahay laga bilaabo 9 AM-5.00PM Isniin-Jimco, iyo 1-5: 00PM Sabti iyo Axad. Haddii aad qabtid su'aalo, wac 612-248-2350.
Qofka qaangaarka ahi waa inuu booqdo ugu yaraan hal mar shaqsi ahaan si uu u helo kaarka bulshada iyo helitaanka hoyga. Markaad haysato kaarkaaga bulshada, waxaad heli kartaa hoyga adigoo isticmalaya taleefanka.
Qoysaska leh caruurta 18 jir kayar:
Qoysasku waxay ka helan hoy ayadoo loo marayo Kooxda gobalka Hennepin.Qoysasku waa inay u codsadaan carruurtooda, shahaadooyinka dhalashada ilmahooda, iyo aqoonsiga gobolka ee dadka waaweyn. Meesha ugu weyn ee tan laga sameeyo waa: Xarunta Adeegyada Aadamiga ee Central-Northeast Minneapolis Dhismaha Adeegyada Caafimaadka, Qeybta 5aad
Xaruunta 525 Portland Ave, Minneapolis
Saacadaha: Isniin - Jimco, 8 subaxnimo - 4:30 galabnimo
Waxaa jiri kara xarun kale oo aad ufiican oo qoyskaaga ka codsan karo hoy iyo kula sheekaysan karo qaab muuqal ah kooxda hoyga. Meelahan oo leh awoodda fiidiyowga ayaa halkan ku qoran "Macluumaadka Hoyga Guri la'aanta" iyo "Si ay ula hadlaan qaab Shirk muuqaaleed ..." Qoysaska qabo su'aalo ku saabsan helitaanka hoyga waa inay wacaan 612-348-9410 waqtiga maalintii, saacadaha shaqada ee toddobaadka. Fasaxyada, dhammaadka usbuucyada, iyo fiidka ilaa 11habeenimo, wac 211 (taleefanka: 651-291-0211) weydiiso waqtiyada danbe kooxda hoyga.
Dhalin yarada iyo qaan garayasha da’da yar:
Dadka da'doodu u dhaxayso 16 iyo 24 waxay isticmaali karaan Shabakada Adeegyada Dhalinyarada si ay u arkaan helitaanka hoyga waqtiga dhabta ah. La xidhiidh adeegyada dhallinyarada mareegtan (41 N 12th St, Minneaplis, MN 55403) 612-252-1200. Wixii macluumaad guud ah oo ku saabsan hoyga ku yaal aagga Metro,wac leenka hoyga metro(telefoonka lacag la'aanta ah) 1-888-234-1329.
Waxaan u baahanahay guryo la awoodi karo
Mareegta guriyeynta waa kheyraad weyn oo lagu raadin karo guryaha la awoodi karo. Dooro Raadinta Horumarsan si aad u ukala shaandhayso mulkiilayaasha aan ogalayn daynta ama jeegga taariikhda.
Xarunta fursada sadaqada ee katoolika 740 E 17th St, 612-204-8300, M, TH, F 9-11subaxnimo
Barnaamijyada guryaha ee St. Stephen iyo adeegyadda goobta ayaa laga heli karaa oo kaliya iyada oo loo marayo Nidaamka Isku-duwaha Gelitaanka ee Degmada Hennepin. Si aad u hesho nidaamkan, waa inaad ku jirtaa hoy ama meel aan ujeedkiisu ahayn hoyga aadamaha.
Haddii aad tahay qof weyn oo aad ku jirtid hoy muddo 14 maalmood ah, aadna helin hoy aadledahay aanad haysan baaritaan qorshaysan, weydii qof ka shaqeeya hoygaada iskuxirka galitaanka. Qiimeeye ayaa sidoo kale laga heli karaa Adult Shelter Connect 10subaxnimo-2duhurnimo Isniin-Jimco.
Qoysaska lajooga dadka u adeega dadka, St. Anne's, ama Drake waxaa si toos ah loogu baari doonaa Isku-xiraha galitanka. Qoysaska jooga hoyga kale, ama hurda banaanka ama meel aan ku habooneyn hoyga aadamaha waxay wici karaan Adeegga Bulshada ee Albaabka hore laga helo 612-348-4111 oo waydiiso gudbis Isku-duwaha Gelitaanka Qoysaska.
Haddii aad qabto su'aalo dheeraad ah oo ku saabsan sida nidaamka isku-duwaha gelitaanka ushaqeeyo waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeraad ah bogga internetka ee gobalka Hennepin. Dadka deggan gobalka Ramsey waxay kaheli karaan macluumaad ku saabsan Isku-duwaha gelitaanka halkan.
Gurigeygu halis ayuu ku jiraa ...
Loogu Talagalay Dadka Weyn:
Gobalka Hennepin waxay awoodi kartaa inay bixiso gargaar deg-deg ah. Qofka qaangaarka ahi waa inuu wacaa 612-596-1300 si loo eego haddii ay u qalmaan gargaarka deg dega ah ee gobalka Hennepin. Fadlan ogow in ay qaadan karto ilaa 30 maalmood si aad dib ooga maqasho Degmada Hennepin oo ku saabsan Kaalmada Degdega ah. Haddii laguu diido gargaarka deg dega ah ee Degmada Hennepin, degganaha Minneapolis, iyo khatarta ah inaad waydo hoygaaga, wac Xarumaha Katooliga Katirsan 612-204-8273 si aad u baratid adeegyadooda ka hortegid la'aanta guri la'aanta.
Haddii aad tahay Askari, fadlan wac leenka gaaritanka Askarta ee St. Stephen 612-767-4573 si aad ugala hadasho qof ku saabsan adeegyada taageerada ee askarta iyo qoysaskooda.
Qoysaska leh caruurta yaryar:
Gobalka Hennepin waxay awoodi kartaa inay bixiso kaalmo gargaar deg-deg ah. Qoysaska gobalka Hennepin ee haysta carruur ka yar 18 jir waa in ay shaqsi ahaan u codsadaan kaalmada gargaarka deg dega ah. Meelaha laga helo halkaan. Fadlan ogow in ay qaadan karto ilaa 30 maalmood si aad dib ugu maqasho Degmada Hennepin oo ku saabsan Kaalmada Degdega ah.
Haddii laguu diido kaalmada gargaarka deg dega ah, degganaha Minneapolis, iyo khatarta inaad wayso hoygaaga, St. Stephen wuxuu haysta lacag kooban si loogu caawiyo qoysaska ka hortaga guri la'aanta. Wac 612-870-2298 shuruudaha u-qalmitaanka iyo tilmaamaha codsiga.
Shirka dhismayaasha hoose ayaa ah inay joojiyaan gurya la'aanta ayaa sidoo kale leh lacag kooban oo loogu talagalay kaalmada gargaarka kirada degdega ah ee laga heli karo daganayaasha Minneapolis. Wax badan ka baro http://www.dceh.org/era/.
Haddii aad tahay Askari, fadlan wac leenkagaaritanka Askarta ee St. Stephen 612-767-4573 si aad ugala hadasho qof ku saabsan adeegyada taageerada ee askarta qoysaskooda.
Kalmada deg dega ee dagmada Ramsey guji halkan.
Waxaan u baahanahay shahaadada dhalashada ama aqoonsiga...
St. Stephen wuxuu caawiyaa shakhsiyaadka iyo qoysaska si ay u helaan shahaadooyinka dhalashada Maraykanka ee ka baxsan dalka. Haddii aad la kulanto shuruudaha soo socda, waxaad tagi kartaa Xarunta Adeegyada Aadanaha ee St. Stephen (2309 Nicollet Ave) Isniin-Jimco laga bilaabo 9 subaxnimo - 4galabnimo si looga caawiyo codsashada shahaadada dhalashada:
Waxaad codsaneysaa gobolka-ka-baxsan (MN) shahaadada dhalashada mareekan,
Waxaad leedahay Aqoonsi Gobolka, iyo
Uma baahnid caawinaad bixinta khidmadaha.
Haddii aad codsanayso shahaadada MN, waxay ubaahantahay caawimo bixinta khidmadaha, ama aan lahayn aqoonsi gobol, akhriso.
Halkee ayay St. Stephen kahelikarta shahadada dhalashada?
Maraykanka kaliya. Haddii aad u baahatahay kheyraad caalami ah, kala xiriir Mike 612-870-2283 si laguu gudbiyo. Haddii aad u baahan tahay shahaadada dhalashada Minnesota, waxaa ugu wanaagsan inaad tagto Xarunta Adeegyada Degmada Hennepin si aad u hesho aqoonsigaaga MN. Waxay ku daabacaan isla markiiba!
Intee in le'eg ayay qaadataa si aan u helo shahaadada dhalashadayda?
Waxay kuxirantahay gobolka. La xiriir Mike wixii macluumaad dheeraad ah.
Maxaa dhacaya haddii aanan heysan aqoonsi gobolkeyga?
Haddii aadan haysan aqoonsigaaga MN oo ay jirtay wax ka yar 5 sano, waxaad ku heli kartaa tan dib loguso cusboonaysiiyay goobta Adeegga Degmada Hennepin. Haddii kiiska taasi aysan ahayn, waxaad lategi kartaa Xarunta Adeegyada Degmada Hennepin qof leh aqoonsi oo kuna yaqaan 2 sano. Haddii aadan haysan aqoonsi gobol kale, wac Mike at 612-874-0311 si aad ugala hadasho fursadahaaga.
Sidee baan u bixinayaa MN kayga ama shahaadada dhalashada gobolka iyo / ama kaarka aqoonsiga MN?
Kharashka shahaadada dhalashada wuxuu ka koobnaan karaa 5-50 doolar iyada oo ku xiran gobolka. Qaar ka mid ah ilaha deegaanka ee kaa caawin kara:
Geeska Hennepin Ave. & 17th St.
Foojarrada la bixiyo Talaado, Arbaco iyo Khamiis laga bilaabo 9: 30-11subaxnimo. Waa inuu degen yahay Minneapolis.
Maalmaha Jimcaha laga bilaabo 9-10: 30subaxnimo, Basilica waxay bixisaa foojarrada Xarunta Fursadaha sadaqada ee Katoolika, 740 E 17 St (17th & Chicago).
Wadaagista & Daryeelista Gacmaha/"Mary Jo's"
Ka caawinta aqoonsiga iyo khidmadaha dhalashada Isniinta ilaa Khamiis, guud ahaan laga bilaabo 10 subaxnimo-3 galabnimo(laakiin aan ka ahayn saacadda qadada).
Haddii aad dalbanayso shahaadadaada dhalashada ee St. Stephen, u tag Qaybta wadaagista & Daryeelka Gacmaha ama Basilica marka hore, ka dibna soo qaado foojarka ama hakaa hubiyaan St. Stephen.
Waxaan u baahanahay cunto ama qubeys...
Xarumaha fursada sadaqada ee katoolika
740 E 17th St Saacadaha: Isniinta-Sabtida; qabaysto / dhaqo (8-11subaxnimo), quraac (7-8 subaxnimo); qadada (11:30 subaxnimo-12:30duhurki)
Wadaagista & Daryeelista Gacmaha
Cuntooyinka: isniin-khamiis 10subaxnimo, 12duhurnimo, iyo 3:30 galabnimo; Sat-Sun 9:30 subaxnimo iyo 11:30barqonimo
Qabayska: Isniin-Khamiis 10: 30-11: 30 barqnimo iyo 1: 30-2: 30 galabnimo
Rooti & Kalluunka
Casho: Isniin-Jimco 5: 30-6: 30galabnimo
Cuntooyinka (714 Park Ave): Dumarka iyo carruurta Isniinta-Jimco 8: 30-9subaxnimo; Qof walba: Isniin-Axad 12-1duhurnimo
Qabayska(510 S 8th St): Isniin-Jimco 9-10barqanimo
Iftiinka badbadada dakada ciidanka
Casho: Sabt iyo Axad at 6galabnimo
Qabayska: Maalin kasta 9 subaxnimo-4galabnimo
Waxaad ka raadin kartaa in kabadan gobalka Hennepin ama ilaha gobalka Ramsey ee Buug-gacmeedka Guryaha.
Banaanka Ayaan jiifaa…
Haddii aad guri la'aan tahay oo aadan hubin meesha aad ka bilaabi lahayd, so daji liiska yar ee MINI ee ilaha halkan. Haddii aad ku seexatid dibadda ama gawaarida, waxaad la xiriiri kartaa barnaamijkayaga wacyiga wadooyinka 612-879-7624 ama daryeeelka lacag la'aanta (oo banaanka ka ah telefoonada bixiya) 1-888-550-7624.
Haddii aad tahay Askari, fadlan wac leenka gaaritanka Askarta ee St. Stephen 612-767-4573 si aad ugala hadasho qof ku saabsan adeegyada taageerada ee askarta qoysaskooda.
Waxaan rabaa Buug-gacmeedka Waddooyinka...
Khayraadkani waxa loogu talagalay dadka heysata guri la'aanta waxaa bilaash kuheli karaa dadka ay hayso baahida. Dadka la kulma hoy la’aanta waxay heli karaan nuqul bilaash ah iyagoo imaanaya xafiiskeena weyn (2309 Nicollet Avenue, Minneapolis 55404, 8:30 subaxnimo-4PM isniin-jimco).
MINNEPOLIS: 2017-2018 Buug-gacmeedka Wadooyinka, eeg halkaan
ST. PAUL: 2016-2017 Buuga gacmeedka Waddooyinka, eeg halkaan
Bixiyeyaasha ama kuwa kale ee haystaan guryaha hoyga waxay bixiyaan lacag yar oo buug walba ah. Si aad u dalbato nuqulada 2017-18 Minneapolis iyo qoraalada cusub ee 2018-19 St. Paul, waxaad isticmaali kartaa foomkan amarka.
Waxaan u baahanahay caawimo wax kale...
Waxaad ka raadin kartaa jawaabta aad raadinayso buug-gacmeedka wadooyinka Buug-gacmeedka Buug-gacmeedku wuxuu kujiraa macluumaad ku saabsan daryeelka caafimaadka, gargaarka guud, waxbarashada iyo fursadaha shaqo, halka laga helo dhar iyo alaab guri, iyo ilo kale oo muhiim ah.
Si aad u ogaato sida St. Stephen uu kugula xidhiidhi karo cod bixiyaha bilaashka ah, wac xafiiska ugu weyn ee 612-874-0311 ama booqo (2309 Nicollet Ave) inta u dhaxaysa 8:30 subaxnimo-4galabnimo, Isniin-Jimco.
Si aad u ogaato sida St. Stephen uu kugula xiriiri karo qof wakiil ka ah, wac xafiiskayaga ugu weyn 612-874-0311 ama booqo (2309 Nicollet Ave) inta u dhaxaysa 8:30 ilaa 10: 30barqanimo Isniin-Jimco.
Haddii aad leedahay taariikh dembi, oo raadinaya guryo, waxaan ku talineynaa in lala xiriiro Amicus RECONNECT oo ah talaabada koowaad.
Haddii aad tahay askari oo la kulmaaya guri la'aan ama khatar ugu jira inuu kaa lumo guriyahaga, fadlan wac Khadka Askarta St. Stephen ee 612-767-4573 si aad ula hadasho qof ku saabsan adeegyada taageerada qoysaska askarta.
Haddii aad la kulmaysid rabshad guri, wac Khadka dhibaatada maalin laha 24/7 ee 1-866-223-1111.
Haddii aadan hubin meesha aad ku bilaabi lahayd, United Way 2-1-1 waa adeeg macluumaad iyo gudbin ah, oo u adeega qayb weyn oo Minnesota ah, oo ay ku jiraan toddobo gobal oo kuyaal goobta metropolitan, iyo qaar ka mid ah Western Wisconsin. Laga bilaabo 8:30 subaxnimo-5galabnimo United Way 2-1-1 waxaa sidoo kale laga heli karaa shaqaale ay ku hadlaan Hmong, Ruush, Soomaali iyo Isbaanish. garaac 2-1-1 ama 651-291-0211 ama booqo bogga internetka ee United Way 2-1-1.